थेसिस के हो ? कसरी उत्कृष्ट थेसिस लेखिन्छ बिस्तृतरुपमा हेर्नुहोस «
प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०७८, बुधबार १०:५५
प्रपोजल तयार पार्दा धेरैलाई केमा रिसर्च गर्ने भन्ने टाउको दुखाइ हुन्छ । जुन क्षेत्रमा आफ्नो बलियो पकड छ, त्यसैलाई समात्न सक्नुभयो भने सजिलो हुन्छ । यदि तपाईं माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान पढाउनुहुन्छ भने तपाईंको शीर्षक माध्यमिक विद्यालयको विज्ञानसँग सम्बन्धित समस्यामा आधारित गराउन सके तनाव स्वाट्टै घट्न सक्छ ।
हाउ टु राइट अ टपिक अफ रिसर्च ?
आज फेरि टपिककै बारेमा कुरा गरौं । यसअघि हामीले टपिक छान्नेबारे केही भनेका थियौं । सकभर आफ्नो रुचि र लगाव भएको टपिक छान्दा राम्रो भनेर । अर्काे एउटा उदाहरण लिउँ है । यदि तपाईं कम साक्षर वा कम शिक्षित मानिसका समूहबारे किन उनीहरू अरूको तुलनामा कमजोर भए भन्ने अनुसन्धानमा रुचि राख्नुहुन्छ भने तपाईंको टपिक के होला ?
एउटा यस्तो हुन सक्छ ‘मिनिङ या एजुकेसन टु त मार्जिनलाइज्ड ग्रुप : एन एथ्नोग्राफी अफ रुट इन नेपाल’ । यो उदाहरण यहाँ किन ल्याइएको हो भने टपिकमा के–के कुरा उल्लेख भए राम्रो होला भनेर हो । जस्तो यो टपिकले मार्जिनलाइज्ड ग्रुपको शिक्षामा एउटा इथ्नोग्राफी गर्छु भन्छ र त्यसको लोकेसन नेपाल देखाउँछ । अर्थात् मूल विषय मार्जिनलाइज्ड ग्रुपको शिक्षा र अनुसन्धान विधि इथ्नोग्राफी स्थान (नेपाल) र टपिकमा यसरी नै तीनवटा कुरा प्रस्ट पार्न सके अगाडिको बाटोमा अल्झिरहनुपर्दैन । यसैमा अरू विधि पनि लागू गर्न सकिन्छ ।
तपाईं केस स्टडी पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यो क्वालिटिभ रिसर्च टाइटलको नमुना हो । क्वालिटिभ गर्नुपर्दा टपिकमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, मेथड र लोकेसन खुलाउँदा राम्रो । जस्तो फोकस इन्फ्लुएन्सिङ एजुकेसन या द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप : सर्भ अफ रुट इन नेपाल’ । अब तपाईंहरूलाई एउटा हामेवर्क दिन्छु ।
प्लिल राइट थ्री रिसर्च क्वैसन अन दिस टपिक । अर्काे पाठमा हामी यसबारे छलफल गर्ने छौं ।
गएको छलफलमा हामीले टपिक कसरी लेख्ने भन्नेबारे केही कुरा गर्यौं । वास्तवमा टपिक भनेकै तपाईंको रिसर्च प्रब्लम हो । क्वालिटी रिसर्चका लागि भने बेग्लै रिसर्च क्वैसन बनाउनु जरुरी हुन्छ । किनभने क्वालिटी रिसर्चले समाजमा जे छ, त्यो नै सत्य मानेको हुन्छ भने क्वालिटी रिसर्चले मानिसका भावना, विचार, सोचाइ फरक–फरक हुने हुनाले सत्य एउटै हुन सक्दैन ।
तपाईंले प्रयोग गर्नुभएका टर्मिनोलोजीले के अर्थ राख्छ ? शीर्षकले भन्न खोजेको कुरा के हो ? शीर्षक कोसँग सम्बन्धित छ ? उनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ? उनीहरूको अवस्थाबारे मूलतः कस्तो कुरा उठिरहेको छ आदि ।
गएको चारवटा खण्डमा हामीले मोटामोटी रूपमा ‘इन्ट्रोडक्सन च्याप्टर’ कसरी लेख्ने भन्नेबारे कुरा ग¥यौं । आज ‘लिटेरेचर रिभ्यु’ बारे केही कुरा गरौं ।
खासगरी थेसिस लेख्नेका लागि यो खण्ड एकदमै महत्वपूर्ण छ । ‘लिटेरेचर रिभ्यु’ बाट प्राप्त गरेकै ज्ञानका आधारमा सम्पूर्ण थेसिसमा सकारात्मक बल प्राप्त हुन्छ । पुस्तक, जर्नल, थेसिस, शिलालेख, डायरी, नीतिगत दस्तावेजजस्ता लेखोट, मूर्ति, तस्बिर, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वका वस्तुजस्ता आर्टिफ्याक्टस, भिडिओ, अडियोजस्ता मिडिया र तपाईंको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य कुरा ‘लिटेरेचर रिभ्यु’ का लागि सामग्री हुन सक्छन् । सबैभन्दा पहिले आफ्नो थेसिससँग सम्बन्धित सामग्री पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गर्दै जाँदा तपाईंको थेसिससँग मिल्ने कुरा वा तपाईंको थेसिसलाई सहयोग पुग्ने कुरा नोट गर्ने गर्नुपर्छ । नोट गर्दा दुई कुरामा ध्यान दिनुहोस् ।
थिमेटिक रिभ्यु :
यो भनेको तपाईंको थेसिससँग मिल्ने रिसर्च यसअघि अरू कसैले गरेको हुन सक्छ । चाहे त्यो थेसिसका रूपमा होस् वा कुनै जर्नल आर्टिकलका रूपमा । त्यो नेपालकै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । त्यस्ता प्रिभियस रिसर्चले तपाईंले रोज्नुभएको अनुसन्धानको समस्याबारे के भनेका रहेछन् त ? त्यो कुरा लिटेरेचर रिभ्युमा अत्यन्तै आवश्यक ठानिन्छ ।
कुनै पनि देशका आफ्ना नियम कानुन हुन्छन् । तपाईंको थेसिससँग सम्बन्धित पक्षमा आफ्नो देश र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा केही पोलिसी, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स तय गरिएका हुनाले थेसिसले त्यस्ता नियम कानुनबारे तपाईंको ध्यानाकृष्ट गर्ने गर्छ । तपाईंले आफू त्यसमा सुसूचित छु भन्ने प्रमाणका रूपमा त्यस्ता डकुमेन्ट खोजी रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्काे पाठमा लिटेरेचर रिभ्युका लागि प्राप्त डकुमेन्ट कसरी रिभ्यु गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिनेछ ।
आज हामी लिटेरेचर रिभ्यु गर्दा के–के कुरामा विचार पुर्याउनुपर्छ । नोट गर्दा कसरी गर्ने भन्नेबारे चर्चा गर्नेछौं ।
सबैभन्दा पहिला थिमेटिक रिभ्युबारे भनौं । तपाईंले फेलापार्नु भएका पुस्तक वा अन्य कुनै छापा वा विद्युतीय सामग्री तपाईंको अनुसन्धानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? सबैभन्दा पहिले तपाईं आफ्नो रिसर्च टपिकभित्र के–कस्ता कि वर्डस् छन् हेर्नुहोस् । कि वर्डस्ले माग गरेका अन्य सहायक शब्दको एउटा सूची बनाउनोस् ।
उदाहरणका लागि हाम्रो रिसर्च टपिक ‘द लेभल’ या नलेज मेनेजमेन्ट इन टिचर्स : अ सर्भे’ या हाइयर एजुकेसन इन्स्टिच्युसन इन काठमाडौं’ भन्ने छ भने तपाईंले मुख्य रूपमा नलेज, नलेज मेनेजमेन्ट एन्ड हाइयर एजुकेसन टिचर्सलाई मुख्य खोजीको विषय बनाउनुप¥यो । फेरि ती शब्दलाई समेट्ने सहायक शब्द पनि काम लाग्ने हुन सक्छन् । जस्तो टाइप्स या नलेज, नलेज, एक्विसन, नलेज युटिलाइजेसन, नलेज प्रडक्टस्, नलेज इकोनोमी आदि । त्यसैले अब लिटेरेचरको खोजी गर्दा यस्ता शब्द भएका लिटेरेचर काम लाग्ने हुन सक्छन् भनेर विचार गर्नु राम्रो हुनेछ ।
त्यस्तै, दोस्रोप्रकारको लिटेरेचर रिभ्यु भनेको थ्यौरिटिकल रिभ्यु हो । तपाईंको अनुसन्धानसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने थ्यौरी पहिचान गर्नु पहिलो काम हुनेछ । त्यसपछि त्यो थ्यौरी भनेको के हो ? त्यसले कस्तो दृष्टिकोण राख्छ ? त्यसका मुख्य–मुख्य दलील के हुन् ? किन ती थ्यौरी वा थ्यौरिज तपाईंको थेसिससँग सरोकार राख्छ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो च्याप्टर भनेको परम्परागत ढाँचामा मेथोलोजी च्याप्टर हो । तर, त्यो च्याप्टर सुरु गर्नुअघि तपाईंको आफ्नो रिसर्च कसरी अगाडि बढ्छ ? रिसर्च क्वैसनको उत्तर कसरी प्राप्त हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट हुनु जरुरी छ । तपाईंले दोस्रो च्याप्टरमा गर्नुभएको थ्यौरिटिकल रिभ्यु र तेस्रो च्याप्टरमा गर्नुहुने मेथोलोजी प्रसेसलाई कसरी तपाईंका भेरिएबल्स रिसर्च प्रब्लमसँग सम्बन्धित बनाएर अगाडि बढाउँदा तपाईंले आशा गर्नुभएको आउटपुट निस्कन्छ भन्ने सोच र त्यसको व्याख्या वा चार्ट नै कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो । यसमा तपाईंले तीन कुरा विचार गर्नुपर्यो ।
यी तीन कुरालाई तपाईं कसरी संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नै तपाईंको कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो । यसले तपाईंको अनुसन्धानको एउटा रूपरेखा तयार पारिदिन्छ । तपाईं त्यही गोरेटो हुँदै सहज रूपमा आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनुहुन्छ । यसलाई तपाईंको रिसर्चको एउटा मानसिक चित्रण भन्दा पनि फरक पर्दैन । जसले तपाईंलाई प्रशस्त मार्गनिर्देश गर्छ ।
क्वान्टिटी/क्वालिटिभ रिसर्चमा फरक
मेथोलोजी च्याप्टर सुरु गर्नुअघि तपाईं कुन प्रकारको अनुसन्धान गर्न चाहनुहुन्छ भन्नेबारे थाहा पाउन जरुरी छ । क्वान्टिटी र क्वालिटिभ रिसर्चमा फरक के छ त ?
अंककै गणना गर्छ कि चित्रतालिका ? बरु मापन अंककै हुन्छ, मान्दैन विचार । अरू जे छ त्यो नै हो सत्य, अन्य कुरा तथ्यांकले नकार्छ । जे नै भन्छ– त्यहीमात्र सकार्छ । वस्तुगत ज्ञानमा लिप्त सत्य एक छ, आखिर सत्यता खोज्न निस्कन्छ मापन गर्न खातिर तथ्यांक । शास्त्रीय विज्ञ थिच्दै मेसिन दंग छ । दुनियाँ हाँक्छ हेर आविष्कार अनन्य छ ।
मेथोलोजी भन्नाले अनुसन्धान विधिमात्र नभई, त्योभन्दा अलि बढी कुरा जनाउँछ । त्यसैले मेथोलोजी र मेथडमा फरक छ । मेथोलोजी भन्नाले तपाईंको थेसिसको वैज्ञानिक र सैद्धान्तिक पक्ष बुझिन्छ भने मेथड भन्नाले फिल्ड वर्क कसरी गर्ने, स्याम्पल कसरी छनोट गर्ने र विश्लेषण कसरी गर्ने भन्नेमात्र बुझिन्छ । यसरी हेर्दा मेथड भनेको मेथोलोजीको एउटा भागमात्र मान्न सकिन्छ । मेथोलोजीमा तपाईंले चार मुख्य भाग लेख्नुपर्ने हुन्छ । ती हुन् :
(१) सैद्धान्तिक पक्ष : यसलाई कसैले फिलोसोफिकल प्रेमिस पनि भन्छन् । जसअन्तर्गत सत्य त्रुथलाई हेर्ने तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? अर्थात् तपाईंको अन्तोलोजी के हो ? तपाईंको विश्वासमा ज्ञानको सिर्जना कसरी हुन्छ ? अर्थात् तपाईंको इपिटिमोलोजी के हो ? यी दुई कुरामा प्रस्ट नभई तपाईंको मेथोलोजी अगाडि बढ्दैन । किनभने तपाईं बाहिर जे छ, त्यो नै सत्य मान्नुहुन्छ अनि ज्ञान मापन गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको थेसिस क्वान्टिटिभ हुन्छ । तर, सत्य एउटै हुँदैन यो त मानिसका विचार र बुझाइअनुसार फरक–फरक हुन्छ भन्ने विश्वास तपाईंको हो र ज्ञानको निर्माण विषयगत हुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको थेसिस क्वालिटिभ हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
(२) विधि पक्ष : यसमा तपाईंले आफ्नो अनुसन्धान ढाँचा, अनुसन्धानको प्रकार क्वालिटिभ कि क्वान्टिटिभ, तपाईंको पपुलेसन एन्ड स्याम्पल क्वान्टिटिभ भए अनि तपाईंको इन्फरम्यान्टस क्वालिटिभ भए, सूचना वा तथ्यांक संकलनका लागि टुल्स के–के, कसरी सूचना वा तथ्यांक संकलन गर्ने हो र त्यसको विश्लेषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । क्वान्टिटिभ भए रिप्रेजेन्टिटिभ स्याम्पल र र्यान्डमनेस आवश्यक पर्छ भने क्वान्टिटिभ भए सानो समूह वा व्यक्तिमै पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
(३) गुणात्मकता अर्थात् : तपाईंको थेसिस गुणस्तरको छ र त्यसमा शंका गर्नुपर्दैन भन्ने प्रमाण के हो ? कसरी तपाईंको थेसिसले त्यस्ता अविश्वासका पाटालाई पाखा लगाउने काम गरेको छ त ? तपाईंले त्यस्तो विश्वास जगाउन के–के काम गर्नुभयो त ? जस्ता प्रश्नको उत्तर यसमा आवश्यक पर्छ ।
(४) नैतिकता र निष्पक्षता : तपाईंले अनुसन्धानका दौरान गर्नुभएका काम कुराले कतै तपाईंको इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउने त होइनन् ? तपाईं कसरी अरूले पत्याउने किसिमले आफ्ना रिसर्च डिजाइन बनाउनुहुन्छ ? उदाहरणका लागि के तपाईंले आफ्नो डाटाका लागि कसैलाई बाध्य पार्नुभएको त छैन ? त्यसो हो भने तपाईंको थेसिसमा नैतिकताको प्रश्न देखियो ।
यो मेथोलोजी च्याप्टरको सामान्य परिचय हो । यसलाई अर्काे पाठमा पुनः प्रस्ट पारिनेछ ।
गएको पाठमा हामीले मेथोलोजी च्याप्टरमा लेखिनुपर्ने चार महत्वपूर्ण कुराबारे चर्चा गर्यौं। आज तिनै चार पक्षलाई पुनः प्रस्ट्याउने कोसिस गर्दै छु । सबैभन्दा पहिले तपाईंले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यो भनेको तपाईंको दृष्टिकोणमा सत्य भनेको के हो ? अर्थात् तपाईंको अन्टोलोजी के हो ? यसले तपाईंको पूरै रिसर्चलाई गाइड गर्छ । तपाईं एउटै मात्र सत्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्च पोजिटिभिजम/पोस्ट पोजिटिभिजम ढाँचाको बन्न पुग्छ । तपाईं क्वान्टिटिभ रिसर्चमार्फत बजारमा उपलब्ध सूचना संकलन गरेर सत्य प्राप्तितिर लाग्नुहुन्छ । होइन, यदि तपाईं सत्य एउटै हुँदैन यो त विचार र भावना अनि सामाजिक परिवेशअनुसार फरक–फरक हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्च ननपोजिटिभिस्ट ढाँचाको बन्न पुग्छ । तपाईं क्वालिटिभ रिसर्चमार्फत समाजको स्थिति, मानिसका विचार र बुझाइ, फरक संस्कृतिका फरक प्रसंगजस्ता सूचना संकलन गर्नुहुन्छ र कसका लागि के सत्य हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनतिर लाग्नुहुन्छ ।
त्यस्तै नलेजलाई तपाईंले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले पनि तपाईंको रिसर्चलाई प्रभाव पारेको हुन्छ । जसलाई तपाईंको epistemology भनिन्छ । यदि मान्छेमा भएका ज्ञानलाई मापन गर्न सकिन्छ भन्ने वस्तुगत ज्ञानमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्चले सर्वेको माध्यम वा सूचनाका लागि तयार पारिएका अन्य टुलबाट संख्यात्मक तथ्यांक संकलन गर्छ । अनि तथ्यांकशास्त्रीय विधि प्रयोग गरेर ज्ञानको मापन गर्न खोज्छ । त्यसलाई ठूलो समूह वा क्षेत्रका लागि त्यही ज्ञानको सामान्यीकरण गर्छ । होइन तपाईंको विचारमा ज्ञान मापन गर्ने विषय नै होइन । यो त इन्टर्याक्सन, डिस्कोर्स वा कुराकानीका आधारमा जे देखिन्छ त्यही नै हुन्छ भन्ने विषयगत ज्ञान अर्थात् सब्जेक्टिभिटीमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्चले इन्टरभ्यु, फोकस ग्रुप डिस्कसन, अब्जर्भेसनजस्ता टुलको प्रयोगबाट सूचना संकलन गर्छ । त्यसैअनुरूप ज्ञान प्राप्तितिर अगाडि बढ्छ ।
मेथोलोजी च्याप्टरमा अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ । हामीले क्वान्टिटिभ वा क्वालिटिभ रिसर्चबारे धेरै चर्चा ग¥यौं । रिसर्चको अर्काे पक्ष पनि छ । त्यो हो– मिक्स्ड मेथोड रिसर्च । यसको अर्थ हुन्छ– तपाईं आफ्नो थेसिसमा दुवैथरी कुरा मिसाउन चाहनुहुन्छ । कसैले यसमा पनि क्वान्टिटिभ हेभी र क्जालिटिभ कम गर्न र कसैले क्वान्टिटिभ कम र वा क्वालिटिभ हेभी पनि बनाउन सक्छन् । दुवैको उत्तिकै सन्तुलन मिलाएर पनि यस्तो थेसिस लेख्न सकिन्छ । मिक्स्ड मेथोड छान्नेले आफ्नो रिसर्च क्वैसन डिजाइन गर्दा नै यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, कुन रिसर्च क्वैसन क्वान्टिटिभ र कुन क्वालिटिभ डाटा लिने भनेर । त्यसैले सबैभन्दा पहिले तपाईं कुन रिसर्च गर्ने हो– टुंगोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । मिक्स्ड मेथड नै गर्ने भए पनि क्वान्टिटिभ पार्टमा र्यान्डमनेस एन्ड रिप्रिजेन्टेटिभनेस भने हुनैपर्छ ।
यदि तपाईं क्वान्टिटिभ रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन प्रकारको क्वान्टिटिभ हो, त्यसतर्फ विचार गर्नुस् । जस्तो सर्वे, क्रस सेक्सनल, केस स्टडी के हो तपाईंले गर्न खोज्नुभएको, त्यसमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । किनभने त्यसले तपाईंको बाँकी काममा सघाउँछ । त्यस्तै यदि तपाईं क्वालिटिभ रिसर्च गर्न चाहनुहुन्छ भने कुन प्रकारको क्वालिटिभ हो, त्यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । जस्तो इथ्नोग्राफी, फेनोमेनोलोजी, केस स्टडी के हो त ? यसैले तपाईंको बाँकी कामलाई एउटा स्पष्ट मार्गतिर लैजान्छ ।
तपाईंले जुनसुकै रिसर्च छनोट गर्नुभए पनि भोलि डाटा एनालाइसिस गर्दा युनिट या एनालाइसिस के हो भन्ने कुरा आजै निक्र्याैल गर्नुपर्छ । युनिट या एनालाइसिस भन्नाले तपाईंको डाटा व्यक्तिप्रधान हो कि संस्थाप्रधान हो वा कुनै समूह विशेषप्रधान हो भन्ने कुरा ठहर गर्नु हो । यसले तपाईंको डाटा कलेक्सन टुल र प्रसेसमा सघाउ पुर्याउँछ ।
पोजिटिभिजम : सत्य भन्ने कुरा हाम्रो काबुबाहिरको कुरा हो । यो यही समाजमा अवस्थित छ र त्यो शाश्वत सत्य हो । वैज्ञानिक पद्धतिद्वारा उक्त सत्य जस्ताको तस्तै पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तो सत्य वस्तुगत हुन्छ । यसलाई अनुसन्धानकर्ताको विषयगत विचारले फरक पार्दैन । अनुसन्धानका प्रायः सबैजसो क्रियाकलाप सदीयौंदेखि यही मूल विचारमा आधारित छ । आज पनि हामी यसैलाई आधार बनाएर संख्यात्मक अनुसन्धान गरिरहेछौं अनि आफूले स्याम्पल छनोट गरेको जनसंख्यामा त्यसलाई सामान्यीकरण गरिरहेछौं ।
पोस्ट पोजिटिभिजम : यो पोजिटिभिजमभन्दा केही फरक तर अनुसन्धान विधि करिब–करिब उस्तै देखिने अनुसन्धान हो । फरक के हो भने यस्तो प्रकृतिको अनुसन्धानले सत्यको करिब पुग्न सकिने तर बाहिरी संसारमै वस्तुगत सत्य छ भन्ने कुरामा भने पूर्ण विश्वास गर्दैन । यसले दुईवटा प्रमुख कुरामा आफ्नो ध्यान लगाउँछ । पहिलो कुरा त के हो भने तपाईंले गर्ने व्याख्या तपाईंले अवलोकन गर्नुभएको वा संकलन गर्नुभएको तथ्यभित्रै अन्तर्निहित हुन्छ र दोस्रो कुरा तथ्यांक संकलन प्रक्रिया पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुपर्छ ।
रिसर्च प्याराडिमले सामाजिक विज्ञानको दार्शनिक पक्षलाई उजागर गर्छ । एउटा अनुसन्धानकर्ताको यो संसार हेर्ने दृष्टिकोण जस्तो छ, उसले गर्ने अनुसन्धान पनि त्यस्तै हुन्छ । ज्ञान के हो ? सत्य के हो भन्नेबारे प्रत्येक मानिसको आ–आफ्नै विश्वास र सोचाइ हुन सक्छन्, जसले उसको अध्ययनमा गहिरो प्रभाव पार्छ । किनभने यही प्याराडिमले नै अनुसन्धानकर्ताले सामाजिक परिवेश कसरी बुझेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसैले त अनुसन्धान विधि तय गर्नुअघि नै रिसर्च प्याराडिम के हो भन्ने कुरा खुलाउनुपर्ने हुन्छ । खासगरी अन्टोलोजी र इपिटिमोलोजीलाई रिसर्च प्याराडिमको दार्शनिक आधार मानिन्छ ।
यदि तपाईं बाहिरी विश्वमा भएका कुरालाई नै आफ्नो सत्य मान्नुहुन्छ र त्यसभन्दा अरू सत्य केही छैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको प्याराडिम भनेको पोजिटिभिजम भयो किनभने पोजिटिभिजिस्टले संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र तपाईंको दृष्टिकोण समान भयो । प्राकृतिक विज्ञानसँग सम्बन्धित अनुसन्धान यस कोटीमा पर्छन् ।
यदि तपाई बाहिरी विश्वको सत्य आत्मसात् त गर्नुहुन्छ तर ज्ञान भन्ने कुरा भ्यालु फ्री हुन सक्दैन भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्च प्याराडिम भनेको पोस्ट पोजिटिभिजम हुने भयो । खासगरी सामाजिक विज्ञानमा अनुसन्धान गर्ने संख्यात्मक अनुसन्धान यो कोटिका अनुसन्धान हुन् । अर्काे रूपमा यसलाई क्रिटिकल रिलिजम पनि भनिन्छ । जसले ज्ञानको निर्माण समाजबाटै हुने भए पनि संरचनात्मक रूपमा वैज्ञानिक सिद्धान्तलाई पनि नकार्दैन ।
यदि तपाईं सत्य भन्ने कुरा समाजमा रहने मानिसले निर्माण गर्ने हो । यो प्रत्येक मानिसको सोचाइमा भर पर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईंको रिसर्च प्याराडिम भनेको इन्टरप्रिटिभिजम भयो, जसले कन्स्ट्रक्टिभिजममा विश्वास गर्छ । यो रिसर्च प्याराडिम भनेको पोजिटिभिजमको ठ्याक्कै अर्काे ध्र्रुव हो । अर्थात् प्रायः गुणात्मक अनुसन्धान गर्नेहरू यो प्याराडिम अँगाल्छन् ।
एउटा अर्काे विश्वास छ– जसले पोजिटिभिजम/पोस्ट पोजिटिभिजम र इन्टरप्रिटिभिजमजस्तो आ–आफ्नो डम्फु लिएरमात्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने कुरा अगाडि सार्छ । त्यो नै व्यावहारिक हो भनिन्छ । तपाईंको रिसर्च क्वैसन्सले माग गरेको उत्तरका आधारमै रिसर्च प्याराडिम तय हुन्छ । कुनै रिसर्च क्वैसन्सले पोजिटिभिजम खोज्ला त कुनैले इन्टरप्रिटिभिजम । त्यस्ता थुप्रै अनुसन्धान भएका छन् ।
त्यसरी निकै महत्वपूर्ण अध्ययन गर्न सकिन्छ । यो अवस्थामा तपाईंको रिसर्च प्याराडिम भनेको प्रग्म्याटिजम हुन पुग्छ । खासगरी मिक्स मेथड रिसर्च वा संख्यात्मक भए पनि गुणात्मक सूचनासमेत संकलन गरेर अनुसन्धानलाई बल पुर्याउने काम भएको छ भने वा गुणात्मक अनुसन्धान भए पनि संख्यात्मक तथ्यांकसमेतको संकलनबाट अनुसन्धान गरिएको छ भने त्यस्ता अनुसन्धानमा यो दृष्टिकोण मौजुद रहन्छ ।
समाजमा हुने गरेका काम–कारबाही, अन्तक्र्रिया, त्यहाँ बस्ने मान्छेको बुझाइ, कुनै खास समूह वा संस्थाको संस्कृतिजस्ता कुराका आधारमा तयार पारिने अनुसन्धान यसअन्तर्गत पर्छन् । यसको मूल जरा भनेको मानवशास्त्र नै हो । मानवीय व्यवहार उसको संस्कृतिसँग गाँसिएको हुन्छ । उसका विचार, धारणा, काम–कारबाही, अरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सबै त्यसैले निर्देशित गरेको हुन्छ । के त्यस्ता सांस्कृतिक, सामाजिक, परिवेश रहेछन् त ? जसले गर्दा ती मानिसको विचार, भावना वा बुझाइ फरक–फरक बन्ने रहेछ ? वा उनीहरूको खास संस्कृति र विचारका मूल आधार के रहेछन् त ? जस्ता प्रश्नको जवाफ नै इथ्नोग्राफी हो ।
उदाहरणका लागि पर्सेप्सन एन्ड प्राक्टिसेस अफ हाइयर एजुकेसन अमोङ वुमेन : एन इथ्नोग्राफिक स्टडी अफ पीएचडी होल्डर्स भन्ने विषय तपाईंको रोजाइ हो भने तपाईंले एजम गरेका केही तीन/चार महिला छनोट गर्नुहुन्छ । उनीहरूसँग बसेर उच्चशिक्षा हासिल गर्दा उनीहरूले गरेका अनुभव, चुनौती, समस्याजस्ता कुरामा छलफल गर्नुहुन्छ । प्रत्येकको छुट्टाछुट्टै अन्तर्वार्ता गर्नुहुन्छ, उनीहरूसँगै घुलमिल गरेर पढाइसँग सम्बन्धित महिलाका भित्री समस्याका कुरा खोतल्न सक्नुहुन्छ । उनीहरूको पढाइको निरन्तरता कसरी रह्यो, कहाँ–कहाँ संघर्ष गर्नुपर्यो, किन त्यस्तो संघर्ष भोग्न पर्यो ? घरपरिवार र समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रह्यो, आज पढाइ पूरा गर्दा कस्तो अनुभव हुँदै छ आदि–आदि गुणात्मक सूचनाका पोको बनाएर विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । उनीहरू हुर्केको परिवेश अध्ययन गर्नुहुन्छ, उनीहरूको सामाजिक र सांस्कृतिक आधार बुझ्नुहुन्छ । उनीहरूका परिवार र उनीहरू बस्ने समाजका अरू मान्छेसँग समेत यससम्बन्धमा कुरा खोतल्नुहुन्छ अनि एउटा सिंगै थेसिस लेख्नुहुन्छ ।
गएका पाठबाट हामी गुणात्मक अनुसन्धानका प्रकारमा छलफल गर्दै छौं । त्यसैक्रममा आज फेनोलोजी के हो ? यो अनुसन्धानमा कति महत्वपूर्ण छ ? र, यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ ? भन्नेबारे छोटो टिप्पणी प्रस्तुत छ ।
दर्शन र मनोविज्ञानका पक्षसँग सम्बन्धित फेनोलोजीले तपाईं बाँच्नुभएको परिवेशमा तपाईंकै जीवन्त अनुभवको खोजी गर्छ । त्यस्तो परिवेश खास–खास परिस्थितिमा विशेष हुन्छन् । तिनलाई उजागर गर्न अरू विधिभन्दा फेनोलोजी बढी उपयुक्त हुन्छ ।
फेनोलोजी वास्तवमा फेनोमेननबाटै बनाइएको हो । उदाहरणका लागि एउटा क्यान्सरपीडितले आफ्नो जीवन कसरी बाँचिरहेको छ त ? भन्ने अध्ययन गर्नुप¥यो भने कुनचाहिँ विधि उपयुक्त होला ? बाहिरबाट उसलाई देख्नेले भनेका कुराको आधार वा अरू क्यान्सरपीडितका आधारमा गरिने सामान्यीकरण वा जो पीडित छ, उसैको पूर्ण कहानीमा आधारित अनुसन्धान प्रभावकारी हुन्छ ।
यहाँ उल्लेख गरिएका कुनै पनि विधि प्रयोग गरेर यो अनुसन्धान गर्न सकिन्छ तर सबैभन्दा भरपर्दाे र अर्थपूर्ण नतिजाचाहिँ फेनोलोजीबाट निकाल्न सकिन्छ । सम्बन्धित क्यान्सरपीडित कसरी बाँचेको छ ? उसका जीवन्त अनुभव के छन् ? क्यान्सर भएको छ भनेर थाहा पाउँदापाउँदै र जीवन क्षणिक छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि जिउनुको वास्तविक अर्थ के होला ? जीवनयापन कसरी हुँदै छ ? जीवनप्रति उसको दृष्टिकोण कस्तो छ ? जस्ता सरल लाग्ने तर गहिरो मनोवैज्ञानिक र दार्शनिक आधारमा उभिएर खोतलिने सूचना फेनोलोजी विधि मानिन्छन् ।
यहाँ तपाईंको फेनोमेनन भनेको ‘क्यान्सर रोग’ भयो । त्यो रोगसँग लडेर बाँचेका मान्छे तपाईंका सूचनादाता अर्थात् स्याम्पल भए । उनीहरूको जीवन्त अनुभव लाइभ्ड एक्सपेरियन्स तपाईंको सूचना अर्थात् डाटा भयो । तपाईंको मूल अनुसन्धान प्रश्न भनेको ह्वाट इज इट लाइक टु लिभ ए लाइफ विथ क्यान्स ? हुने भयो । एउटा क्यान्सरपीडितले जीवनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र उसले लगाउने जीवनको अर्थ तपाईंको अनुसन्धानका मूल नतिजा हुने भए ।
यसमा प्रत्यक्ष अनुभवका चार पाटा चासोका विषय हुन सक्छन् । लाइभ्ड स्पेस (स्पासियालिटी), लाइभ्ड बडी (कर्पोरियालिटी), लाइभ्ड टाइम (टेम्पोरालिटी), लाइभ्ड ह्युमेन रिलेसन्स (रिलेसनालिटी । यस्ता थुप्रै अनुसन्धानका शीर्षक छान्न सक्नुहुन्छ । जस्तो– एक्सपेरियन्स अफ अ लाइफ लङ टेम्पोरारी टिचर इन नेपाल, एक्सपेरियन्स अफ स्टुडेन्ट्स हु अल्वेज स्टुड फस्र्ट इन अल क्लास एक्जामिनेसन्स, एक्सपेरिएन्सिङ अ पार्लिमेन्टरियन, लिभिङ अ लाइफ इन इल्डर्ली होम इटीसी ।
यी अनुसन्धान अरू विधिबाट गर्न नसकिने होइनन् तर लाइभ्ड एक्सपेरियन्स पहिचान गर्ने उपयुक्त विधिका रूपमा फेनोलोजी अग्रस्थानमा देखापर्छ ।
केस स्टडी मूलतः बहुसूचना पद्धतिमा आधारित हुन्छ । उदाहरणका लागि यदि तपाईंको विषय ‘इन्टिग्रेसन अफ आईसीटी इन हाइयर एजुकेसन : ए केस अफ ओडीएल इन नेपाल’ छ भने उच्चशिक्षा जहाँ सूचना प्रविधि प्रयोग गरी अनलाइन दूरशिक्षा प्रदान गरिन्छ, त्यो तपाईंको फेनोमेनन अर्थात् परिवेश भयो । तपाईंले त्यस्ता विश्वविद्यालय वा कलेजको केस स्टडी गर्नुहुन्छ । नेपालमा रहेका त्यस्ता संस्थाको जीवन्त वर्णन तपाईंको लक्ष्य हुन्छ । आफ्नो व्याख्या जीवन्त बनाउन तपाईं ती संस्थामा आईसीटी प्रयोग गरी ओडीएल सञ्चालन र विद्यार्जनमा अग्रगामी भूमिका खेल्ने शिक्षक, प्रशासक, नीति निर्माता, प्राविधिज्ञ सूचनाको एउटा पाटो मान्नुहुन्छ (सेवा प्रदाय) भने विद्यार्थी र अभिभावक (लक्षित वर्ग) अर्को पाटो मान्नुहुन्छ ।
यसो भन्दा के कुरा पनि बुझ्नुपर्छ भने शैक्षिक अनुसन्धानको काम भनेको बजारमा भएका ज्ञानमा नयाँ ज्ञान थप गर्नु हो । जुन आफ्नो अध्ययनका आधारमा र तपाईंले छनोट गर्नुभएको थ्यौरीका आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ । यसअघि प्रतिपादन गरिएका थ्यौरीमा तपाईंको अनुसन्धानले के कुरा थप गर्न सक्यो, के कुरा ठीक छ वा छैन भन्ने भन्न सक्यो वा पूर्णतः त्यो थ्यौरीलाई नकार्दै नयाँ थ्यौरी दिन सफल भयो ? भन्ने कुरा नै थेसिसका मूल मर्म हुन् । हामीले लेख्ने थेसिस पनि यही मर्ममा आधारित हुनुपर्छ । अरूको थ्यौरीलाई आधार बनाएर गरिने अनुसन्धान र त्यसबाट प्राप्त नतिजाका आधारमा केही नयाँ ज्ञान वा थ्यौरी प्रतिपादन गर्नु डिडक्टिभ एप्रोच हो भने अरूको थ्यौरीको सहायताविना नै आफ्नै डाटाका आधारमा नयाँ थ्यौरी प्रतिपादन गर्नु ग्राउन्डेड थ्यौरी अर्थात् इन्डक्टिभ एप्रोच हो ।
कुन अवस्थामा ग्राउन्डेड थ्यौरी अनुसन्धान गर्ने त ? भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । तपाईंले छनोट गर्नुभएको विषयमा यसअघि निकै कम अनुसन्धान भएका छन् वा त्यससम्बन्धी ज्ञान अत्यन्तै न्यून छ भने त्यस्तो अवस्थामा ग्राउन्डेड थ्यौरी उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्काे अर्थमा तपाईंले छान्नुभएको शीर्षकमा लिटेरेच रिभ्यु गर्न पर्याप्त अनुसन्धान छैनन् भने तपाईं आफैंले ग्राउन्डेड थ्यौरी उपयोग गरी योगदान दिन सक्नुहुन्छ ।
यसो भनिरहँदा अर्काे कुरा के पनि ख्याल राख्नुपर्छ भने ग्राउन्डेड थ्यौरी अनुसन्धान विधि अरूभन्दा केही फरक देखिन्छ । अरू प्रकारको अनुसन्धानमा तपाईं पहिले सूचना संकलन गर्नुहुन्छ अनि त्यसको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । तर, ग्राउन्डेड थ्यौरीमा सूचना संकलन र विश्लेषण प्रक्रिया साथसाथै गरिएको हुन्छ । तपाईं डाटा कलेक्सनको दौरान त्यसैमा आधारित हाइपोथेसिस निर्माण गर्नुहुन्छ । त्यो हाइपोथेसिसको परीक्षण गर्न थप डाटा संकलन गर्नुहुन्छ । यसलाई अनुसन्धानमा एब्डक्सन भनिन्छ । जसमा डाटा कलेक्सन र डाटा एनालाइसिससँगसँगै अघि बढाइनुपर्ने हुन्छ । ग्राउन्डेड थ्यौरी संख्यात्मक वा गुणात्मक दुवैथरी अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
मान्छेका आ–आफ्नै कथा हुन्छन् । विगत नै उनका कथा हुन् । आफू र आफ्नो वरिपरिका अरू मान्छे र परिवेशमा आधारित अनुभव उनका कथाका आधार हुन् । ती कथालाई अर्थपूर्ण तवरले अगाडि ल्याउने प्रक्रियामा न्यारेटिभ इन्क्वायरीले राम्रो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले यो विधि नितान्त अनुभवका विश्लेषणमा आधारित हुन्छ । अब प्रश्न उठ्न सक्छ– कस्तो अनुभव ? अनुसन्धानमा कुनै खास परिस्थिति वा परिवेशलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको फेनोमेन हो । तपाईंले व्यक्तिका कुन परिवेशको अनुभवमा आधारित कथालाई अनुसन्धान गर्न लाग्नुभएको हो भन्ने कुरा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
दोस्रो सवाल हो– सोसियल्टीको । न्यारेटिभ इन्क्वायरी विधि अवलम्बन गर्ने अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो सूचनादाता स्याम्पल/इनफम्र्यान्टको भावना, चाहना, इच्छा, आकांक्षाजस्ता वैयक्तिक सूचना संकलन गर्नुपर्छ । तर, उसको सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक र संस्थागत सामाजिक परिवेश भुल्नुहुँदैन । यिनै सामाजिक परिवेशमा उनका कथा देख्न, बुझ्न र अर्थपूर्ण तरिकाले अनुभव गर्न सकिन्छन् ।
तेस्रो सवाल हो– प्लेस अर्थात् स्थानको । कुनै पनि घटनाको मूल अंश कुन स्थानमा घटेको हो भन्नेसँग बढी सरोकार राख्छ । तपाईंले जसको कथामा आधारित अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ, उनको अनुभव कुन र कस्तो भौतिक वातावरणबाट निर्देशित रहेछ भन्ने खुट्ट्याउने हो भने तपाईंको अनुसन्धान अधुरो रहन्छ ।
न्यारेटिभ इन्क्वायरी कथाबाटै सुरु हुन्छ । एउटा यस्तो कथा जुन तपाईं उनीहरूसँगको सामिप्यता, छलफल, अन्तक्र्रिया, अन्तर्वार्ताबाट जस्ताको तस्तै निकाल्न प्रयास गर्नुहुन्छ । एउटा यस्तो कथा जुन उनीहरूको जीवन र जिउनुसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले न्यारेटिभ इन्क्वायरीको अन्तिम लक्ष्य भनेको कसैको कथालाई जीवन र जिउने पद्धतिसँग गाँसेर हेर्नु र विश्लेषण गर्नु हो ।
तपाईंको अनुसन्धान ‘जेन्डरिङ टेक्नोलोजी इन हाइयर एजुकेसन : अ न्यारेटिभ इन्क्वायरी अफ स्टुडेन्टस् अफ अनलाइन डिस्टेन्स एजुकेसन इन नेपाल’ भन्ने शीर्षकमा छ भने तपाईंले त्यस्ता उच्चशैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने (अझ त्यस्तो अनुभव गरिसकेका) विद्यार्थी छान्नुहुन्छ । उनीहरूसँग बसेर विगत र वर्तमानका अनुभव संकलन गर्नुहुन्छ, प्रत्येकले भोगेको जीवनकथाका रूपमा । यस्तो कथा सही रूपमा आवोस् भन्नका लागि तपाईं पहिल्यै कसरी अगाडि बढ्ने, के–के कुरा सोध्ने, वैयक्तिक र सामाजिक परिवेश कसरी छुट्ट्याउने, अनुभवका समयलाई कसरी वर्गीकृत गर्ने कुरामा आधारित भएर छलफल र अन्तर्वार्ताका लागि ट्रिगर्स बनाउनुहुन्छ । तपाईंको अनुसन्धानका लागि तपाईंलाई चाहिने सूचानाका आधारमै तपाईं त्यस्ता ट्रिगर्स तयार पार्नुहुन्छ, जुन तपाईंको रिसर्च क्वैसनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् ।
पाइलट टेस्टबाट प्राप्त सूचनालाई विश्लेषण गरी रिलाएबिलिटी स्कोर निकाल्न सकिन्छ । यसका थुप्रै सूत्र भेट्न सकिन्छ । तपाईंको टुल्सको रिलाएबिलिटी ० दशमल ७ भन्दा माथि हुनुपर्छ । त्यति नआउन्जेल टुल्समा सुधार्दै पाइलटबाटै रिलाएबिलिटी टेस्ट गर्दै जानुपर्छ ।
भ्यालिडिटीको विभिन्न प्रकार छन् । यदि तपाईंको उद्देश्य भविष्यको पूर्वानुमान परीक्षण गर्नु छ भने तपाईंले प्रेडिक्टिभ भ्यालिडिटीको सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ । नभए प्रायः संख्यात्मक अनुसन्धानमा कन्टेन्ट भ्यालिडिटी (तपाईंको अनुसन्धानात्मक प्रश्नले खोजेका उत्तरका लागि तपाईंले छान्नुभएको विषयवस्तु मिले नमिलेको हेर्नुहोस्) जस्तो माथिको उदाहरणमा इन्ट्रेपे्रन्युरियल ओरियन्टेसनले कभर गर्नुपर्ने विषयवस्तु सन्तुलित मात्रामा छन् छैनन् । फेस भ्यालिडिटी टुल्स तपाईंले राखेका उद्देश्य पूरा गर्नेखालको छ छैन, हेर्ने प्रचलन छ । यति सुनिश्चित भएपछि तपाईं तथ्यांक संकलनका लागि प्रस्थान गरे हुन्छ ।
त्यसपछि गणितको कुनै पाठ तपाईंको उद्देश्यअनुसार रोज्नुस् र दुवै थरीका कक्षामा पढाउन लगाउनुस् । एउटा समूहमा १० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको गणित शिक्षकलाई पढाउन लगाउनुस् । अर्काे समूहमा १० वर्षभन्दा कम अनुभव भएका शिक्षकलाई पढाउन लगाउनुस् । पढाएको विषयवस्तुमा आधारित एउटा परीक्षा बनाउनुहोेस् । पढाइ सकिसकेपछि दुवै समूहमा विद्यार्थीको परीक्षण गर्नुहोेस् । कुन प्रकारको शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले बढी उपलब्धि हासिल गर्छन्, दुवैको नतिजा तुलना गरी निर्णय लिनुहोेस् । ती दुईबीच देखिएको अन्तर सिग्निफिकान्ट हो कि होइन भन्ने हेर्न भने टी टेस्ट वा अन्य कुनै स्टासटिकल इन्फ्रेन्सको प्रयोग गर्न सकिन्छ । (एजुकेशन नेपाल, एजुसन्जाल, साझाप्रेसबाट जानकारीको लागी लिएको हो ।)
देशभर सुरु भयो आजदेखि एसइई परीक्षा
यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) आज बिहान ८ बजेदेखि देशभर एकैसाथ सुरु भएको छ
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान
बूढानीलकण्ठ स्कुलमा छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत
काठमाडौँ: देशको जेठो विश्वविद्यालयका कर्मचारी इमान्दार, लगनशील र कानून कार्यान्वयनमा अब्बल हुनुपर्छ । उनीहरुलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारी